Chin World News – Page 31
Chin News December 27, 2018
Thil lawmawm deuh chu Bible hian rinna sawifiahna chiang tak Heb 11:1 ahalo pai (nei) ru reng mai a: “Rinna hi thil beiseite awm ngeia hriatna, thil hmuh lohte hriatfiahnaani”. A…
World News December 26, 2018
ရေးသားသူ – မာန်သစ်ငြိမ်း(ရှေးဟောင်းသုတေသန) နာဂလူမျိုးသည် မြန်မာနိုင်အနောက်မြောက်ဘက်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ရှိ နာဂတောင်တန်းတွင်နေထိုင်ကြသူများ ဖြစ်ကြသည်။ နာဂလူမျိုးသည် တစ်မျိုးတည်းဖြစ်သော်လည်းအမျိုးစုပေါငများစွာ ကွဲပြားလျက်ရှိပေသည်။ ၎င်းတို့နေထိုင်ရာဒေသ၏ ပထဝီဝင် အနေအထားကိုလိုက်၍ စကားနှင့် ဓလေ့ထုံးစံများမှာအနည်းငယ်စီ ကွဲပြားလျက်ရှိပေသည် ။ နာဂလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂သန်းခန့်ရှိပြီး ၁.၈၅သန်းသည် အိန္ဒိယမဏိပူရ ၊ အာသံနှင့် အရုနချယ် ပရာဒက် ပြည်နယ်များ တွင်နေထိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သူဦးရေမှာ ၁သိန်းခွဲခန့် ရှိသည် ။…
Chin News December 26, 2018
Zuri mipa Pathian zongasi (Krismas pual) 25th December-2018
Zuri mipa Pathian zongasi (Krismas pual) 25th December-2018 Mah Video hi na zoh ah cun akawnglam fiangte in nahngalh te lai. Thilaphan mi hna – 6th March 2017 khaasi,…
ရေဒီယိုကို တီထွင်ခဲ့သူ ဂုဂလီယယ်မို မာကိုနီ(Guglielmo Marconi)
ရေဒီယိုတီထွင်သူ ဂုဂလီယယ်မို မာကိုနီ (Guglielmo Marconi) ကို အီတလီ (Italy)၊ ဗိုလိုညာ (Bologna) မှာ ၁၈၇၄ က မွေးဖွားပါတယ်။ မိဘတွေက ချမ်းသာကြွယ်ဝကြလို့ အိမ်မှာပဲ ဆရာတွေပင့်ပြီး ပညာသင်ပေးပါတယ်။ ၁၈၉၄ မှာအသက်နှစ်ဆယ်ပြည့်တဲ့ ခါ မာကိုနီက အရင်နှစ်အတန်ကြာ ဟိန်းနရစ်ခ်ျဟာ့ဇ် (Heinrich Hertz) စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအချက်တွေကို ဖတ်မိတယ် ။ အဲဒီစမ်းသပ်ချက်တွေကလက်တွေ့ထင်ရှားပြသနိုင်တဲ့ အကွက်က အလင်းရောင်ရဲ့…
ဗိုလ်ချုပ်၏ သမိုင်းဝင် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၅) နှစ် ပြည့်ခဲ့ပြီ
By General Aung San ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ကား အခြားတော့ မဟုတ်။ မဟာမိတ်တပ်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဂျပန်ကို ပြန်တော်လှန် ရန် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဆန္ဒရှိနေကြောင်း ဖီးမာရှယ် ဆလင်း အား ဗြိတိသျ ထောက်လှမ်း ရေး မှတဆင့် သိစေခဲ့သည့် နေ့ဖြစ်သည်။ ထို နေ့ကား ၁၉၄၃ ဂျန်န၀ါရီ လ ယခုလို အချိန်တွင်ဇြစ်သည်။ အဆိုပါ သတင်းကို ဖီးမာရှယ် ဆလင်းထံ သယ်…
Chin News December 24, 2018
Biaknak kawngah “Debate” hi vunzoh ve tuah, Christian, Hindu, Islans/muslin le Budhis hna an si, aho dah an thiam deuh tiah naruah?? Part-C
Mah hi adonghnak lei asi, an chim mi vialte chungin zei dah nahmuh, naruah ning?? DVB debate..
Sermons December 24, 2018
Thihnak He Kaa Naih Tuk Nihin Zong Ah Inn Phan Manh Loin Ka Thi Kho Ko
Thihnak he kaa naih tuk,nihin zong ah inn phan manh loin ka thi kho ko.. Nain zeitik caan poh ah khuika hmun poh i zeibantuk in thih poh kaa manh tukmi hi THIHNAK ka teinak…
ချာလီချက်ပလင် ဆိုသည်မှာ(Charlie Chaplin) ဘယ်သူလဲ..ဘာလဲ…
ချာလီချက်ပလင်ဟုကမ္ဘာကျေ်ာ သောလူရွှင်တော် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လိုက်မှာနာမည် ရင်းအားဖြင့် ချားစပင်ဆာချက်ပလင်ဖြစ်သည်။ သာမန်လူရွှင်တော် ဘဝမှတစ်ဆင့်ထက်တစ်ဆင့် ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ၊ ဒါရိုက်တာနှင့် ရုပ်ရှင်ကား ထုတ်ဝေသူအထိတိုးတက်လာပြီးလျှင် ကြွယ်ဝချမ်သာသော ရုပ်ရှင် ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တစ်ဦး ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားခဲ့သူဖြစ်ပေသည် ။ ချာလီချက်ပလင်ကို လန်ဒန်မြို့ ၁၈၈၉ ခု ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားသည်။ အဖဖြစသူမှာ လူရွှင်တော် ချားချက်ပလင်ဖြစ်၍၊ အမိမှာ အဆိုတော် လီလီဟာလီဟန္နာ ဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ်ကပင် သူ၏ညီဖြစ်သူ ဆစ်ဒနီချက်ပလင်နှင့်အတူ…
Chin News December 23, 2018
Biaknak kawngah “Debate” hi vunzoh ve tuah, Christian, Hindu, Islans/muslin le Budhis hna an si, aho dah an thiam deuh tiah naruah?? Part-B
Part-B DVB debate biaknak mithiam taktak hna an si, bia tak te in rak ngai than tuah u, zei tin dah na hmuh ning asi. Cre: DVB debate
Biaknak kawngah “Debate” hi vunzoh ve tuah, Christian, Hindu, Islans/muslin le Budhis hna an si, aho dah an thiam deuh tiah naruah??
Hi debate nak kawng hi kazoh hna tikah Hindu pa biachim mi hi mi lungthin atei deuh hngamaw tiah kahmuh, nangte zeitin dah naruah ve, biatak te in rakngai ve law, vun chim ve tuah…